hoy ny hafatra paska nentin’ny FFKM. Nitondra fampaherezana ny FFKM mba ho tanteraka amin’ny rehetra ny fifalian’ny paska, Jesoa maty sy nitsangana ho velona, nitondra ny aretintsika sy mizara fiainana ho antsika isan’andro. Tsy voafatotry ny rindrin’efatra ihany koa ny maha fiangonana, hoy ny hafatra. Nofintinana sy nampitaina ny hafatry ny COE na ny Fiombonan’ny fiangonana maneran-tany. “Mandresy ny tahotra, manome fanantenana, manafaka Jesoa ilay nitsangana tamin’ny maty. Miatrika ny covid-19 izao tontolo izao. Marobe ny fiangonana mihitsy ary tsy afaka mankalaza ny Paska amin’ny mahazatra antsika… Betsaka ny zavatra manahirana antsika fa mihoatra noho ireny ny fifaliantsika sy ny fanantenan’ny Paska ifampizarantsika”, hoy ny ampahany tamin’ny hafatra izay mitory fampaherezana. Nisaotra ny fanjakana ihany koa ny FFKM mitondra fanazavana isan’andro mikasika ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka. Niantso ny herivelona rehetra mba hiezaka hifampizara sy hifanohana ary hitandro ny firaisankiana. Nanao antso avo tamin’ny mpiasan’ny haino aman-jery na mpomba ny mpanohitra ny fitondrana mba hiezaka hiara-hiasa. Manana zo hahafantatra ny vaovao marina miseho ny rehetra, hoy ny FFKM. Nilaza ny FFKM fa mahita ny olana mianjady amin’ny olona ka mifampidinika amin’ny fitondrana ny hanatsarana ny fandaminana hamonjena maika ny sosialim-bahoaka.